Muse sultan: bukaan u maleeya beri inay dhimanayaan baan nooyimaada - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Muse sultan: bukaan u maleeya beri inay dhimanayaan baan nooyimaada
La daabacay tisdag 1 december 2015 kl 14.45
"Soomaalida qof ay ku ogaadan hiv in uu qabo way ku aflagaadeyneysaa"
Gibril Musesultan oo horumood ka ah ururka somaliska hälsoteamet. Foto: Warsame Elmi/SR
Horumar weyn oo ah dhanka dawada ayaa laga sameeyey tan iyo markii 30 sanno ka hor Sweden lagu arkay bukaankii ugu horeeyey ee qaba cudurka Hiv.
Horumarkas dawo ayaa u suurogeliyey dadyowga qaba cudurka Hiv in ay ku noolaadaan nolal la mid ah tan dadka aan qabin cudurkan. Laakiin saas oo ay tahay dadyowgan la nool hiv ayaa weli la kulmaya takoor iyo bahdilaad salka ku haya aqoon xumo iyo aragtiyo aan raad laheyn.
Ururka somaliska hälsoteamet waa urur ka jira magaadala Stockholm oo taageero iyo caawinaadba siiya dadyowga soomaalida ee uu haleelo cudurka hiv. Sidoo kale ururkan ayaa soomalida ku nool nawaaxiga Stockholm u qabta aqoon kororsi iyo wacyigelin la xiriirta cudurada ku faafa galmada, gaar ahaan hiv-ga.
Gibril Muse sultan oo hormood ka ah ururkan ayaa sheegay in dadka waxa ugu horeeya ey ogeysiiyaan ay tahay sharcigu middaa wuxuu ka oranaya haddii qof hiv qabo uu la galmoonayo qof kale.
- Sharciga waddanka wuxuu dhigayaa qofka hadduu cudurka qabo oo uu la kulmo qof kale oo uu ka helay waa inuu u sheego cudurkas in uu qabo. Waayo qofka waxaa saaran masuuliyad ah cudurkiisa in uu kontoroolo.
Ururka somaliska hälsoteam illaa iyo bartamahii sagaashamaadkii ayuu ka soo shaqeynayey arrimaha la xiriira cudurada galmada layskugu gudbiyo sida cudurada hiv iyo aids. Dadka soomaalida Sweden ayuu ururku siiyaan wacyigelino la xiriira sida ey cuduradani ku faafaan iyo sida layskaga difaaci karo. Sidoo kalena ururka ayaa gacan iyo taagero u fidiya bukaanka soomaalida ee uu haleelo hiv sida uu yeri Gibril muse sultan.
- Waxyaabaha aan ka caawino bukaanada soomaalida waxaa ka mid ah tusaale in aan telefoono hosbitaalada uga turjuno, waayo soomaalida bukaanka ah badanaa ma rabaan in uu turjubaan soo horfariisto. Sidoo kale waxaa noo yimada dad marka lagu sheego cudurka iyagoo naxsan oo u maleeyaya in berriba ay dhimanayaan. Waan dejinaa oo u sheegnaa cudurkan in uu yahay cudur caadi ah oo cudurada ka mid ah. Dawooyinka lagu siiyey sidii loogu talogalay hadaad u qaadatid waxba kagama duwanaanaysid dadka kale, ayuu yiri.
tisdag 1 december 2015 kl 12.59